Tag: foomamka internetka | Martech Zone
Tag: foomamka onlayn
Joojinta Madax xanuunka: Maxay foomamka khadka tooska ah uga caawiyaan cabirka ROI-gaaga
Arbacada, Maarso 29, 2017 Arbacada, Maarso 29, 2017 Steve Hartert
Maalgashadayaashu waxay cabbiri karaan ROI waqtiga dhabta ah. Waxay iibsadaan shey, oo ay eegaan qiimaha saamiga daqiiqad kasta, waxay isla markiiba ogaan karaan in heerka ROI uu yahay mid togan ama taban. Hadday sidaas u fududaan lahayd suuqleyda. Cabirka ROI waa mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan suuqgeynta. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah howlaha ugu adag ee aan la kulanno maalin kasta. Iyada oo dhammaan xogta daadineysa
Waraaqaha: Foomamka Degdegga ah, ee Dareenka Leh, iyo Lahabeynka
Talaado, Disembar 6, 2016 Talaado, Disembar 6, 2016 Douglas Karr
Waraaqaha ayaa u oggolaanaya qof walba inuu si deg deg ah u abuuro foomamka internetka ama boggaga wax soo saarka, si macquul ah, iyo inuu u calaamadeeyo sida ay jecel yihiin - dhammaantood isagoo aan qorin lambar. Foomamkaagu waa u fududahay macaamiishaada iyo jaaliyadahaaga inay ku buuxiyaan moobiil ama desktop madaama ay si buuxda uga jawaabaan. Waraaqaha waxaa ka mid ah awoodda lagu daabici karo foomam aan xadidnayn, oo laguu oggolaado inaad ku dhex gasho bartaada, awood kuu siiso inaad la qabsato Stripe bixinta, ama ku riixdo xogtaada adoo adeegsanaya Zapier. Adiga ayaa dooran kara
Dhowr sano waxaan la shaqeynay macmiil maalgashi miisaaniyadeed muhiim ah la leh hay'ad sumadeyn si loo dhiso dhisme websaydh cusub oo qurux badan. Macmiilku wuu noo yimid sababtoo ah ma arkin wax hagayaal ah oo soo socda oo ka socda goobta wuxuuna naga codsaday inaan ka caawinno iyaga. Waxaan sameynay waxa ugu horeeya ee aan caadiyan qabano, codsi ayaan ku gudbinay bogga xiriirkooda waxaanan sugnay jawaab. Midkoodna ma imaan. Ka dib waan la xiriirnay oo weydiinnay